FIXED MATCHES လောင်းကြေး 100% သေချာသည် - အခမဲ့ ပုံသေပွဲများ ၊ HT/FT ပုံသေပွဲများ ၊ ပုံသေပွဲများ ၊ ဘောလုံး အခမဲ့ အကြံပြုချက်များ 1x2 ခန့်မှန်းချက်များ ၊ နေ့စဉ် အကြံပေးချက်များ 1x2 လောင်းကစား ဘောလုံး ၊ ပုံသေ အလောင်းအစားများ 100% သေချာသည် ။
FIXED Matches လောင်းကစား 100% သေချာသည်။
အခမဲ့ ပုံသေပွဲများ ၊ HT/FT ပုံသေပွဲများ ၊ ပုံသေပွဲများ ၊ ဘောလုံး အခမဲ့ အကြံပြုချက်များ 1x2 ခန့်မှန်းချက်များ ၊ နေ့စဉ် အကြံပြုချက်များ 1x2 လောင်းကစား ဘောလုံး ၊ ပုံသေ အလောင်းအစားများ 100% သေချာသည် ။
FIXED Matches 100% သေချာသည်။
ပုံသေပွဲများ 100% သေချာပါသည်။
21.05.2022 စနေနေ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ Odds ရနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ် အချိန်ပိုင်း/အချိန်ပြည့် ပြင်ဆင်ထားသော ပွဲများ တစ်ပွဲလျှင် 25.00 ဝန်းကျင်တွင် ပေါက်ကြေးများနှင့်အတူ ပွဲစဉ်နှစ်ခုစလုံးတွင် စုစုပေါင်း ပေါက်ကြေးသည် အမြဲတမ်း 500.00 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ လိုချင်ရင် ဒီနှစ်ခုကနေ တစ်ပွဲပဲ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ပုံသေပွဲများ ဒါမှမဟုတ် သင်လိုချင်ရင် Big Odds အတွက် ပွဲနှစ်ခုစလုံးကို ဝယ်လို့ရပါတယ်။
24/7 WhatsApp ပံ့ပိုးမှု
သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူလိုပါကငွေပေးပို့မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ ပုံသေပွဲများ Cryptocurrencies များ (Bitcoin၊ Ethereum၊ USDT Tether နှင့် အခြား Cryptocurrencies အားလုံးကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်)၊ Perfect Money၊ Skrill၊ Neteller၊ Ria Money၊ MoneyGram နှင့် Western Union တို့ဖြစ်သည်။ အခြားငွေလွှဲနည်းများ မရရှိနိုင်ပါ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ရောင်းချထားသော HT/FT Fixed Matches အားလုံးကို ကြည့်ရန်
အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံး HT/FT Fixed Matches များကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
14.05.2022 - စနေနေ့
လိဂ်- BOLIVIA ဌာနခွဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် – Apertura
ပွဲစဉ်- Oriente Petrolero – Santa Cruz
အကြံပြုချက်- 1/2 (Half Time/ Full Time)
အတိုးနှုန်းများ- 34.00 ရလဒ်- 1:0/1:2 အနိုင်ရခဲ့သည်။
လိဂ်- တူရကီ ၁။ လစ်ဂ်
ပွဲစဉ်- Altinordu – Balikesirspor
အကြံပြုချက်- 2/1 (Half Time/ Full Time)
အတိုးနှုန်းများ- 23.00 ရလဒ်- 0:1/2:1 အနိုင်ရခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် သင်သည် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံအထောက်အထားများကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း ဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို သင်ကြည့်ရှုလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube Channel ကို ဖွင့်ရပါမည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို ထုတ်ပြန်၍မရပါ။
လာလည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube ချန်နယ် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သက်သေများအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန် HT/FT ပုံသေအလောင်းအစားများ
အပ်ဒိတ်- မေလ 15 ရက်၊ 2022 မှ ညနေ 1:10 နာရီ
အခမဲ့ အကြံဥာဏ်များ ခန့်မှန်းချက်များ
ခန့်မှန်းချက်များ အကြံပြုချက်များကို ရယူပါ။
အခမဲ့ သိကောင်းစရာများ ခန့်မှန်းချက်များ
ငါတို့ website တွင် GetFixedMatch.com နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသည်။ ဘောလုံးလောင်းကစားအတွက် အခမဲ့ပွဲစဉ်များ. ဒါကိုသိဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အခမဲ့ပွဲများ ကြိုဟောချက်တွေက ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သေချာပေါက် အောင်ပွဲခံတဲ့ပွဲပါ။.
အခမဲ့ပွဲများ ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေပါ။ ဘောလုံးသတင်းသမားများဒါက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ပွဲတွေပါ။ ပုံသေပွဲများ အားလုံးသဘောတူပြီး အကျိုးအမြတ်ကို အာမခံချက်ရှိတဲ့ ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။
လိုချင်ရင် ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ အခမဲ့ပွဲများ ဒါဆိုရင် အမြတ်ကို အာမခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ပုံသေပွဲများ သို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရပါမည် သို့မဟုတ် သင်လုပ်နိုင်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို ကြည့်ရှုရန် ပုံသေပွဲများ သင်ဝယ်နိုင်သည်။
အပ်ဒိတ်- ဧပြီလ 30 ရက်၊ 2022 မှ ညနေ 6:30 နာရီ
ဘောလုံး လုံခြုံသော ပုံသေပွဲများ လောင်းကြေး
၀၇.၀၂.၂၀၂၂ – တနင်္လာနေ့
လိဂ်- နော်ဝေး Eliteserien
ပွဲစဉ်- ဗိုက်ကင်း – ဂျာဗက်
အကြံပြုချက်- 2.5 ဂိုးအထက်
အတိုးနှုန်းများ: 1.50 ရလဒ်: ?:?
၀၆.၀၂.၂၀၂၂ – တနင်္ဂနွေနေ့
လိဂ်- NETHERLANDS Eredivisie
ပွဲစဉ်- AZ Alkmaar – Waalwijk
အတိုးနှုန်းများ- 1.50 ရလဒ်- 1:3 အနိုင်ရခဲ့သည်။
လိဂ်- နော်ဝေးဌာနခွဲ ၂ – အုပ်စု ၁
ပွဲစဉ်- Notodden – Arendal
အတိုးနှုန်းများ- 1.50 ရလဒ်- 2:0 ရှုံးခဲ့သည်။
၀၄.၀၂.၂၀၂၂ – သောကြာနေ့
လိဂ်- သြစတြီးယား ၂။ လီဂါ
ပွဲစဉ်- စိန့်ပိုတန် – Wacker Innsbruck
အတိုးနှုန်းများ- 1.50 ရလဒ်- 3:1 အနိုင်ရခဲ့သည်။
၀၃.၀၂.၂၀၂၂ – ကြာသပတေးနေ့
လိဂ်- ICELAND Besta-deild karla
ပွဲစဉ်- Vikingur Reykjavik – Fram
အတိုးနှုန်းများ- 1.50 ရလဒ်- 4:1 အနိုင်ရခဲ့သည်။
11.05.2022 - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ပွဲစဉ်- Valur – Akranes
အတိုးနှုန်းများ- 1.50 ရလဒ်- 4:0 အနိုင်ရခဲ့သည်။
ဘောလုံးပုံသေပွဲများ, အခမဲ့ ပုံသေပွဲများ, အကောင်းဆုံး ပုံသေပွဲများ 1×2 အကြံပြုချက်များ;
အပ်ဒိတ်- မေလ 16 ရက်၊ 2022 မှ 9:31 နာရီ
Tags: ပုံသေပွဲများဆွဲပါ။, ဘောလုံးပုံသေပွဲများ, ဘောလုံးပုံသေပွဲများ, လက်မှတ်ပုံသေပွဲများ, နေ့စဉ် ပုံသေပွဲများ
အခမဲ့အကြံပေးချက်များ 1×2 ဘောလုံး
အခမဲ့အကြံပေးချက်များ 1×2 လောင်းကစားပွဲများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ အခြားဝဘ်ဆိုက်များမှ လင့်ခ်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ ကြော်ငြာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Fixed Matches များကို 100% သေချာစွာ ဝယ်ယူပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ် GetFixedMatch.com သင့်အတွက် သင့်တော်သောနေရာဖြစ်သည်။
အပ်ဒိတ်- မေလ 16 ရက်၊ 2022 မှ ညနေ 12:41 နာရီ
â Older Posts
WhatsApp 24/7 ပံ့ပိုးမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube Channel တွင် သင်ရှာဖွေနိုင်သော ဗီဒီယိုအထောက်အထားများအားလုံးကို။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုအထောက်အထားများကို ဤနေရာတွင် လွှင့်တင်၍မရပါ။ ဗီဒီယိုအထောက်အထားအားလုံးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube Channel သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube Channel ကို ဝင်ကြည့်လိုပါက။
ခန့်မှန်းချက်များ အကြံပြုချက်များကို ရယူပါ။ (82)
HT/FT ပြုပြင်ထားသော အလောင်းအစားများ မော်ကွန်းတိုက်များ
HT/FT သက်သေပြထားသော အလောင်းအစားများ
Fixed Single Match အစစ်အမှန်
VIP လက်မှတ် ပုံသေပွဲများ
ပုံသေပွဲများ အကြံပြုချက်များ 1×2
ပုံသေ Bet24 အကြံပြုချက်များ 1×2
အကောင်းဆုံး ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော အားကစားဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
ဟယ်လီနာ 1×2 အားကစားဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
Hot Fixed အားကစားဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ
ယနေ့ လောင်းကစား 1×2 ဘောလုံး အကြံပြုချက်များ